माओवादी केन्द्रको सचिवालय बैठक सम्पन्न – cmprachanda.com
२०७४ श्रावण ७ गते २०:२५ मा प्रकाशित
श्रावण ७, काठमाडौं । सोमबारदेखि सुरु भएको ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) को सचिवालय बैठक शनिबार दिउँसो सम्पन्न भएको छ । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठक विभिन्न निर्णय गर्दै शनिबार सम्पन्न भएको हो ।
बैठकमा पार्टी सचिवालय सदस्यहरुले निर्वाचनको समीक्षा, पार्टी पूनर्निर्माण र आगामी योजनाबारे आफ्नो रिपोर्ट र धारणा राख्नुभएको थियो । शनिबारको बैठकमा नेता रामबहादुर थापा बादलले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो भने नेताहरुले उठाएका जिज्ञासा, समीक्षा र आगामी योजना लगायतका विषयमा बैठकमा अध्यक्ष क. प्रचण्डले आफ्नो धारणा राख्दै बैठक समापन गर्नुभएको थियो ।
सचिवालय बैठकले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरुबारे जानकारी गराउन आइतबार दिउँसो २.०० बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, पेरिसडाँडामा विशेष पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिनुभयो । आइतबारको पत्रकार सम्मेलनलाई पार्टी अध्यक्ष क. प्रचण्डले सम्बोधन गर्नु हुनेछ ।
भलिबल संघद्वारा अध्यक्ष प्रचण्डलाई सम्मान
By cmprachanda	 Jul 22, 2017